Lungisa iScreen esiphukileyo seScreen: Amanyathelo okulungisa kunye nokulungisa iScreen | I-Androidsis
Uyilungisa njani ifowuni yakho?
UNerea Pereira | 03/05/2021 09:00 | Izaziso
Into yokuqala ekufuneka uyigcinile engqondweni xa ujonga indlela yokwenza lungisa isikrini sakho esiphathwayo, kukuba awufanelanga ukulandela amanyathelo amaqhinga angayekiyo ukujikeleza i-Intanethi. Nokuba bangabonakala beyiseka kangakanani, umxholo wobuxoki, kwaye baninzi abantu abasebenzisa i-YouTubers abaye bavavanya kwaye bakhanyela iipesenti ezingama-90 zala maqhinga.
Ke ukuba ngethuba udibana nevidiyo apho bakuxelela khona ukuba ngentlama encinci ungayilungisa iscreen sakho esiphathwayo, musa ukuyibeka emngciphekweni. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba kunokwenzeka ukuba ugqibe ukuyaphula, kwaye ngokuqinisekileyo uya kushiyeka ngaphandle kwesiphelo sakho. Ke ngoko, Siza kuchaza into ekufuneka uyenzile xa uzifumanisa ukule meko, njengoko kukho amanyathelo ambalwa ekufuneka uwalandele ngaphambi kokuba uthathe iselfowuni ukuze uyilungise. Kuba ewe, kuphela kwendlela yokwenene nethembekileyo onayo.
1 Yintoni omele uyenze ngaphambi kokuba ulungise isikrini sakho esiphathwayo
1.1 Into yokuqala ekufuneka uyenzile ngaphambi kokuba ulungise isikrini sakho esiphathwayo
1.2 Inyathelo elilandelayo ukulandela: ukuseta kwakhona
2 Apho ungayisa khona iselfowuni yakho ukuze uyilungise
Yintoni omele uyenze ngaphambi kokuba ulungise isikrini sakho esiphathwayo
Unako Lumka kakhulu kwaye ufumane elona qweqwe libalaseleyo, Kuya kuba yimpazamo ukuba ifowuni yakho iwe phantsi okanye ibethe into eshiya iscreen sayo sonakele. Kodwa ngokungathandabuzekiyo olona hlaselo lukhulu lwentliziyo seso sihlupheka xa esiwa ngobuso phantsi, kwaye simphakamisa kancinci sithandaza kubo bonke oothixo esaziyo ukuba akukho nto yenzekileyo kuye.
Sele sazi ukuba kuya kubiza malini ukulungisa iscreen seGold Fold
Kodwa ayisoloko isebenza, kwaye sifumana ingozi yokwenyani, okanye ikhefu elibi kakhulu elikuvumela ukuba uqhubeke nokusebenzisa i-terminal yakho. Kodwa oku kunokuba kubi ngakumbi, ke ukulungisa iselfowuni yakho, kuya kufuneka uye kwinkampani yokulungisa phantsi kweemeko. Kodwa njengoko besitshilo, ngaphambi kokuyithatha ukulungisa kukho amanyathelo aliqela ekufuneka uwalandele, kwaye siza kukucacisela apha ngezantsi.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ngaphambi kokuba ulungise isikrini sakho esiphathwayo
Ukuba unethamsanqa ukuba ifowuni yakho iyasebenza, Ngaphambi kokuba ulungiswe isikrini, kukho into ekufuneka uyenzile. Sithetha ukuba kufuneka ukhusele idatha yakho ukuze umntu oza kulungisa isixhobo sakho angabinakho ukufikelela kubucala bakho. Kwaye oku, kuya kufuneka ukope idatha kwaye uyicime kwisiphelo sakho.
Ukuze ukwazi khuphela idatha kwifowuni yakho ephathekayo, eyona nto unokuyenza kukusixhasa sonke isixhobo. Ngokubhekisele kwizicelo ozikhupheleyo, nganye kuzo inenkqubo yayo yogcino, ke kuya kufuneka ufake nganye kwaye uqinisekise ukuyivula ukuba ayikho. Oku kubaluleke ngakumbi ekuthumeleni imiyalezo, njengeTelegram, iWhatsApp kunye nezinye iindlela. Ewe ungalibali ukugcina bonke abafowunelwa.
Ukuba kwelinye icala, iscreen sefowuni yakho siyekile ukusebenza ngenxa yekhefu, ungakhathazeki, konke akuphelanga. Kuya kufuneka uyixhume kwiPC yakho ukuze ube nokufikelela kuyo yonke idatha yakho. Ukuba unesiphelo sendlela ye-Android, uya kuba nakho ukufikelela kwiifoto kunye nabanye. Kwimeko yokuba nesixhobo se-iOS, yonke into ilungelelaniswe kakuhle, ke awuyi kuba neengxaki. Kwaye ukuba unengcambu, uya kuba nakho ukusebenzisa izicelo zomntu wesithathu, ezinje ngokuHamba kunye neTitanium Backup, nangona le yinto ekufuneka uyifakile kwangaphambili.
Inyathelo elilandelayo ukulandela: ukuseta kwakhona
Kukho isizathu sokuba sikuyalele ukuba wenze ukhuphelo lwasemva kwayo yonke into onayo ngaphambi kokuba uyokulungisa isikrini sakho esiphathwayo, kwaye ke oko kuya kufuneka usete kwakhona. Kwakhona, ukuba unethamsanqa lokuba ngaphandle kwescreen esaphukileyo sisebenza, Sishiya amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuseta kwakhona kuseto lwefektri, ebisusa yonke into ukuze ijongeke ngathi iphuma nje ebhokisini.
Ukuba i-terminal yakho AndroidKuya kufuneka uye kuseto kwaye ukusuka apho ungene kwicandelo lenkqubo. Xa sele ulapha, bonisa ukhetho oluphambili ukuze ube nakho ukufaka uKhetho lokubuyisela. Apha uza kubona ukhetho oluthi Buyela kwimeko yefektri. Kwimeko apho umaleko wokwenza ngokwezifiso womenzi wakho engakubonisi olu khetho apha, ungasebenzisa injini yokukhangela ukuyifumana.
Ukuba unayo i-iPhone, yiya kuseto kwaye uye kwiCandelo ngokubanzi. Apha, phantse esiphelweni sokhetho, uya kubona ukuseta kwakhona, kwaye ungakhetha ukuba ufuna ukucima yonke imixholo kunye noseto ukuze luhlale lutsha nje kwibhokisi yalo.
Ukuba ngelishwa isikrini sakho esiphathwayo asisebenzi, ukuba mobile Android kuya kufuneka ukuba wenze ngocwangcisa nzima. Cima ifowuni kwaye uqhubeke ngokucinezela iqhosha lamandla kunye neqhosha elisezantsi ngexesha elinye. Ngale ndlela uya kufaka ukhetho lwangaphakathi lwe-Android, kwaye ukusuka apho uya kucwangcisa iinketho ekufuneka uzikhethile ngokucofa kunye nevolumu yamaqhosha, kule meko Sula idatha kunye ne-cache.
Kwakhona, kwimeko yokuba ne-iPhone isikrini sayo esingasebenziyo, inkqubo iya kuxhomekeka kwinkqubo yokusebenza. NgeMacOS Catalina kwaye kamva uya kuba nakho ukukhangela iselfowuni yakho kwi-Finder. Nangona kwiinguqulelo zangaphambili nakwiWindows kuya kufuneka ukhuphele iTunes. Ukusuka kweli nqanaba uya kuba nakho ukukhetha i-iPhone yakho kwaye kukhetho oluza kuvela uza kubona i-Buyisela iqhosha le-iPhone, ngenxa yoko awuzukufuna ukubamba i-terminal yakho.
Apho ungayisa khona iselfowuni yakho ukuze uyilungise
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokulungisa isikrini sakho esiphathwayo kukuthatha okanye ukusithumela kwinkonzo yobuchwephesha yobungcali. Apho banabalungisi abagxile kwi-brand yesiphelo sakho, ngenxa yoko iziphumo ezilungileyo ziyaqinisekiswa. Ingxaki ngenkonzo yayo kukuba ihlala inexabiso eliphezulu ngokuthelekiswa nabanye, kodwa ke, iindawo zokugcina izinto ziya kuba zezentsusa.
Unayo ezandleni zakho iivenkile zokulungisa ezingekho semthethweniKuqheleke kakhulu ukuba ufumane enye yezi zinto igxile kakhulu ekulungisweni kweefowuni, kwaye njengomgaqo jikelele amaxabiso azo abiza kakhulu. Ngaphandle koku, kuxhomekeke ekubeni kusetyenziswa iziqobo zoqobo okanye ezisemgangathweni na, ukulungiswa okungcono okanye okubi kuya kulungiswa. Kwaye ayifani ukuya kwivenkile yobumelwane kunokuya eBeMovil okanye kwiNdlu yeeFowuni.
Ingcebiso yethu kukuba, ukuba isixhobo sakho sitsha kwaye siyabiza, yiya kwindawo yokulungisa esemthethweni. Kwaye ukuba wenze utyalomali olufanelekileyo kwisixhobo sakho, kunokwenzeka ukuba ukhetha ukuqiniseka ukuba ukulungiswa kwaso kunokwethenjelwa. Ukuba i-terminal yakho ineminyaka embalwa ubudala kwaye awukhathali nokuba iziphumo zayo zezona zilungileyo, ungaya kwivenkile yomntu wesithathu kwaye ugcine ngakumbi.
Kwimeko apho i-terminal yakho ine-inshurensi, ungayisebenzisa ukuze ulungise iscreen esiphathwayo simahla. Okokugqibela kwaye ukuba ungazama ngenxa yokuba ungumntu onobuchule, kukho amaphepha afana ne-iFixit apho bachaza ukuba ungayenza njani, ukongeza kwizinto oza kuzifuna. Kodwa ukuba ujonga ngokusondeleyo, iindleko ziphezulu, ke kungcono ukuyisa kwindawo efanelekileyo ukuze ilungiswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uyilungisa njani ifowuni yakho?
Ezonaapps zabucala ze-Android